कोरोना प्रकोप : के छ खबर परदेशीको ? - Harekpal
कोरोना प्रकोप : के छ खबर परदेशीको ?
नयाँपत्रिका दैनिक ९ चैत्र २०७६, आईतवार ०९:०२ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ९ चैत । विश्वका १८६ देश पुगिसकेको कोरोना भाइरसले विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म यो रोगको संक्रमण देखिएको छैन । तर, विदेशमा संक्रमण फैलिँदा त्यहाँ रहेका नेपालीको स्वास्थ्यको विषयमा देशमा चिन्ता बढेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तथ्यांकअनुसार भारतमा १५ लाख र तेस्रो मुलुकमा ३५ लाख नेपाली छन् । परदेसिएका नेपाली उच्च शिक्षा र रोजगारीमा सक्रिय मात्र छैनन्, वर्षमा नौ खर्ब रेमिट्यान्स पठाएर जन्मभूमिको अर्थतन्त्र धानेका छन् । गत आर्थिक वर्ष उनीहरूले आठ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स पठाएका थिए । यो अभूतपूर्व विपत्मा तिनको अवस्था के छ ? देशले सोध्ने वेला भएको छ ।
कोभिड–१९ बाट शनिबार साँझसम्म विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार आठ सय नाघेको छ । कुल संक्रमित दुई लाख ८६ हजारमध्ये ९३ हजार ६ सय निको भएका छन् । वल्र्ड ओ मिटर्स डट इन्फोका अनुसार कुल संक्रमित संख्याको चार प्रतिशतको मृत्यु भएको छ, ९६ प्रतिशत निको भएका छन् । नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।